Manokatra dia eo amin'ny fireneny roa i Shina sy Dominika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Manokatra dia eo amin'ny fireneny roa i Shina sy Dominika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao Mafana Dominica • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanasoniavana ny fifanarahana eo amin'i Shina sy Dominika
Nanana fifandraisana efa hatry ny ela i Dominika sy Shina hatramin'ny nananganana ny fifandraisana ara-diplaomatika tamin'ny 2004. Androany, nanao sonia fifanarahana momba ny dia tsy misy visa eo amin'ny fireneny ny firenena roa tonta. Ny olom-pirenen'ny firenena roa tonta dia afaka mandeha miverina sy miverina tsy mila visa mialoha ny fiaingana.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena roa tonta dia anisan'izany ny fampiasam-bolan'i Shina amin'ny sehatry ny fahasalamana ao Dominika miaraka amin'ny fitokanana ny Hopitaly Friendship Dominica-China, izay efa nanova ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana ao amin'ny nosy. Ny hopitaly no hany manolotra tolotra MRI any amin'ny faritra atsinanan'i Karaiba, zava-bita azo tanterahina noho ny fifandraisana matanjaka eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny taona lasa dia nahita ny nosy kely Dominika hanitatra ny fidirany iraisam-pirenena. Ny fifanarahana momba ny fanafahana visa dia ahafahan'ny Dominikana miditra amin'ny iray amin'ireo goavambe ara-toekarena manerantany, manamafy ny fahafaha-manao dia ho an'ny fandraharahana sy ny fialam-boly. Ny olom-pirenena Dominikana dia afaka mandeha tsy misy visa na visa-on-arrival any amin'ny firenena 160 mahery, mitentina 75% amin'ny toerana eran-tany izay manamora ny fitantanana raharaham-barotra any amin'ny firenena samihafa.
Raha ampitahaina, ny pasipaoron'i Shina ihany no mamela ny fidirana maimaim-poana amin'ny firenena sy faritany 79. Ny tolotra voafetra dia mahatonga azy ho sakana ho an'ny olom-pireneny amin'ny fidirana amin'ireo foibe manerantany toa an'i Royaume-Uni na Etazonia. Midika izany fa ny olom-pirenena Shinoa dia tsy maintsy mandalo amin'ny korontana ara-birao amin'ny fahazoana visa, mandany fotoana, vola ary loharano sarobidy.
Toy izany koa no azo lazaina ho an'ireo izay manantena ny hanao raharaham-barotra ao Shina. Ohatra, ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola avy amin'ny firenena toa an'i India, Afrika Atsimo, Nizeria, na Singapour dia tsy maintsy mitsambikina amin'ny sehatra mitovy, satria tsy manana fifanarahana visa amin'i Shina izy ireo. Mitaky famenoana antontan-taratasy lava be izany izay mety hitarika ho amin'ny fotoana tsy hita izay misy fiantraikany ratsy amin'ny orinasa.
“Tsy tena mamela [fidirana] tsy misy visa ho an'ny tompon'ny pasipaoro maro i Shina, ary nomen'izy ireo izany tombontsoa izany ny pasipaoro Dominikanina amin'ny sokajy rehetra. Noho izany, tombony lehibe izany, ”hoy ny praiminisitra Roosevelt Skerrit. “Ny [olom-pirenena Dominikana] dia ho afaka hivezivezy any amin'ny toeram-piasana maro manerana izao tontolo izao,” hoy izy nanampy.
Ny tolotra visa midadasika an'i Dominica dia iray amin'ireo antony nahatonga ny nosy ho toerana mahafinaritra ho an'ny mpampiasa vola mitady fahalalahana mivezivezy bebe kokoa. Lasa lalana malaza hanatrarana izany ny Programa Citizenship by Investment (CBI) an'i Dominica. Niorina tamin'ny 1993, ny programa dia manome hery ireo mpampiasa vola manerantany amin'ny fanomezana azy ireo zom-pirenena faharoa sy ny tombontsoa rehetra mifandraika amin'izany rehefa misy ny fandraisana anjara amin'ny tahirim-bolam-panjakana na trano fonenana. Amin'ny maha-programa malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, i Dominica dia miantoka fa ireo izay lasa olom-pirenena dia mandalo dingana maromaro amin'ny fahazotoana mba hiarovana ny lazany malaza.
Tao anatin'ny folo taona farany, ny fandaharan'asan'i Dominica dia nandray ireo mpampiasa vola Shinoa marobe izay liana amin'ny fahazoana zom-pirenena faharoa ho fiarovana ny hareny, ny fianakaviany ary ny hoaviny. Ankoatra ny fahafahana mivezivezy, ny maha-olom-pirenena an'i Dominica dia manampy ny fianakaviana hiditra amin'ireo andrim-pampianarana ambony indrindra eran-tany, hamantatra ny mety ho fandraharahana hafa sy ny fahafahana ara-bola ao amin'ny firenena iray manana fifandraisana amin'ny firenena matanjaka hafa toa an'i Royaume-Uni sy Etazonia.